Eto ianao: Home / triatra / Crowdfire fampiharana Latest Version Premium vaky
Crowdfire fampiharana Latest Version Premium vaky
Crowdfire is a specially designed social media management app that helps you grow the reach of your Twitter and Instagram account. Izany dia an-tserasera fampiharana izay manampy anao hampitombo ny mpanatrika, na dia ao amin'ny YouTube na Twitter. Na izany aza, ianao koa dia afaka mahazo mpanaraka ao amin'ny Twitter sy ny mpanjifa tena haingana. The online Crowdfire Crack lets you can find the ones who unfollowed you on Twitter, ary afaka ihany koa ny toerana misy ny fifandraisana misy eo amin'ny roa kaonty Twitter na Instagram. Crowdfire io dia azo jerena ho an'ny finday fitaovana toy ny iOS sy Android rafitra miasa. Milaza ihany koa ny fampiharana raha misy ny mpanara-dia tsy mavitrika avy ny fotoana kelikely, iray volana na roa toy izany, dia afaka Firenena Mikambana manaraka azy ireo raha tianao ho.
Non-mpanara-dia ny olona izay nanaraka, nefa tsy mbola nanaraka Anao na amin'ny alalan'ny fanehoana tsy mavitrika nandritra ny fotoana kelikely na ny antony hafa. Io endri-javatra ny fampiharana manampy anao koa unfollow ny olona ho amin'ny 100 isan'ora. Tsy maintsy efa nandre momba ny olona ho liana amin'ny olona iray mety manokana. tsara, izay mitovy tranga eto, mpankafy eto dia ny olona izay manaraka anao, fa tsy mbola narahin'ny anao. Arakaraka ny olona izay manaraka, dia vao mainka mahazo laza ianao.
Crowdfire milaza aminao ny zava-misy ankehitriny ny tantara fa izay nanaraka anao tamin'ny lasa 48 ny ora sy ny Firenena Mikambana izay nanaraka.
Ireo no olona izay mitoetra momba ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao. Mpankafy toy ary fanehoan-kevitra amin'ny lahatsoratra rehetra saika mba hamela ny anareo fantatrao fa mbola miahy anao.
Mihazakazaka Namana Check mamela anao hahita ny fifandraisana eo ny kaonty sy ny namanao, na ny kaonty misy mpampiasa hafa, raha Hianao no manaraka na tsia ny tsirairay. Azonao atao koa ny mijery eo misy tantara roa hafa raha toa ianao ka liana ampy. Ary, Eny, Justin Bieber Selena Gomez mbola manaraka.
Blacklisted ireo olona izay mety ho nanaraka Anao, nefa tsy te-hanaraka azy ireo indray noho ny azy ireo ho spammers, kaonty hosoka na inona na inona antony, na mety hanana izany, Crowdfire Crack would not suggest you these people to follow.
Whitelist ny lisitry ny olona tsy te-la-manaraka na inona na inona antony. Ireo olona ireo dia mety ho ny toerana tena olo-malaza, namana akaiky, olom-pantany na ny havana. Crowdfire would not suggest you these people to un-follow them even if they have not followed yet.
Izany dia manampy fitaovana tahaka ny mamela anao drafitra mialoha ny lahatsoratra Instagram tahaka afaka mifidy ny sary, na tianao na inona na inona ka nanorina azy ho fotoana iray manokana mba hamoaka. It also tells you that which is the best time to publish your post depending on whom are your followers.
Afaka manohy mba hampitomboana ny momba ny tenanareo sy ny haka ny olona tao amin'ny Twitter manokana arakaraka ny lasibatra olo-. Noho izany, dia afaka mikendry ny olona izay manaraka sasany na be niches anarana izany, Mitendre fotsiny ny anarana ao amin'ny dika mitovy mpanara-, and it will pull up every active fan who follows.
Search amin'ny Google Play fivarotana na iOS sy hametraka ny Crowdfire
Sokafy ny Twitter na Instagram amin'ny alalan'ny fampiharana ny Crowdfire sy ny sonia-in izany.
Crowdfire dia mamorona vaovao roa sary amin'ny finday, Ambarao dia ny fampiharana izay hanamora ny Instagram voalamina ho Lahatsoratra, ary ny fitomboana sehatra hanangana ny fiaraha-monina ao amin'ny Instagram sy Twitter.
Azonao atao koa ny hanova na mamoaka lahatsoratra voalahatra Instagram amin'ny alalan'ny balafomanga matoanteny.